Efa nisoloky 800 tapitrisa Ar: tratra ilay jiolahy sy ny fitaovana fanamboarany vola sandoka | NewsMada
Noraisim-potsiny! Niainga avy amin’ny fitoriana noho ny fisolokiana avo lenta nataon’ity jiolahy antsoina Ramaromisa Ruphin no nahafahan’ny zandary nisambotra azy teto an-drenivohitra. Efa nahatratra 800 tapitrisaAr ny vola voasolokiny, mbola nahatrarana vola sandoka 600 tapitrisa Ar sy fitaovana fanamboarana vola sandoka amin’ny ravim-bola 20 000 Ar ihany koa tao an-tranony.
Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena misahana ny heloka bevava ao Toamasina, ny Chef d’escadron, Rajaohasina Délson Andrien, noho ny fitorian’ireo olona voasolokin’ity lehilahy ity tamina raharaha lavanila tany amin’ny faritra Mananara Avaratra sy Sambava no nahafahan’ny zandary nanenjika azy. Olona marobe no voasolokiny tamin’ny fanomezana taratasim-bola tsy misy antoka. Malaza ratsy amin’ny fisolokiana izy ka nandritra ny fisavana ny tranony no nahitana fandikan-dalàna hafa dia ireo vola sandoka sy fitaovana fanamboarana vola sandoka. Nambaran’ity manamboninahitra ity fa saika haparitaka teto an-drenivohitra sy tany amin’ny faritra ireto vola sandoka marobe ireto. Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa tambajotra iray matanjaka amin’ireny faritra sy distrika mamokatra lavanila ireny no tena anapariahan’izy ireo ny vola sandoka vitany.
Mpisoloky avo lenta koa
Olona maromaro tao Mananara Avaratra no voasolokiny. Manana ny paikadiny manokana izy satria mody mifanaraka amina mpandraharaha sy mpamokatra lavanila ary mametraka antoka amina taratasim-bola ka alainy ny vokatra lavanilan’ireo mpandraharaha ireo. Aorian’izay raha haka ilay vola any amin’ny banky ny tompom-bokatra dia jerena fa tsy misy vola ny kaonty. Toy izany hatrany ny ataon’ity mpisoloky ity amin’ireo olona solokiany. Ireo mpandraharaha amina lavanila ao Sambava, hatrany Mananara Avaratra hatreto no mitondra faisana aminy. Miisa efatra, araka izany, ireo olona niharan’ny fisolokiany ka nametraka fitoriana tany ao amin’ny zandary misahana ny heloka bevava ao Toamasina. Ho an’ireto olona efatra voasolokiny ireto dia efa mahatratra 800 tapitrisa Ar ny fitambaran’ny vola voasolokin-dRamaromisa Ruphin. Nambaran’ny lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava hatrany efa nisy roa lahy naman’ity jiolahy mpisoloky ity tratra tao Sambava,ny 5 marsa lasa teo ary efa naiditra am-ponja vonjimaika fa nandositra tany Mananara Avaratra ary nihazo an’i Mandritsara ary nifarana teto Antananarivo kosa Ramaromisa Ruphin. Nisy fotoana izy niverina indray tany Soanierana Ivongo sy tao Toamasina ary nitsoaka nakaty an-drenivohitra ka izao niafara tamin’ny fahatrarana azy izao.